NamasteNEPALI.com: महामन्त्री हारेपछि गगनले जारी गरे यस्तो मनछुने विज्ञप्ति !
मुद्रा विनिमय राशीफल नेपाली पात्रो अनलाइन रेडियो टेलिभिजन
महामन्त्री हारेपछि गगनले जारी गरे यस्तो मनछुने विज्ञप्ति !
नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री पदमा हारेका युवा नेता गगन थापाले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
१३ औं महाविधेशन अन्तर्गत मंगलबार सम्पन्न महामन्त्रीको मतगणनामा थापा विपी पुत्र शशांक कोइरालासँग पराजित भएका थिए ।
उनले आफूलाई मत दिने सबैलाई धन्यवाद दिँदै निर्वाचित नयाँ नेतृत्वले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसको १३औं महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन आ-आफ्नो ठाँउवाट क्रियाशील सवैलाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । महाधिवेशनवाट निर्वाचित आदरणीय सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षज्यूलाई हार्दिक वधाई तथा सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु । नेपाली काँग्रेसलाई सवैको काँग्रेस बनाउने गुरुत्तोर जिम्मेवारी निर्वाचित पदाधिकारीको काँधमा आएको छ । सवैको भावना समेटी पार्टीलाई गतिशिल रुपमा अगाडि वढाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु ।
यस महाधिवेशनमा मलाई अपार स्नेहका साथ मत दिने, सुभेच्छा प्रकट गर्ने,साथ सहयोग र समर्थन गर्ने सवै प्रति ह्दयदेखि नै आभारी छु । महाधिवेशनमा सहभागी साथीहरु मात्र होईन, देश भित्र र बाहिर रहेका काँग्रेसजनहरू,आम नेपाली आमावुवा,दिदीबहीनी तथा दाजुभाईहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा देखाएको स्नेह,आशा ,भरोसा अनि प्रेरणा र मार्गदर्शनलाई मैले मप्रतिको विश्वासको रुपमा लिएको छु । भेटघाट,सामाजिक संजाल, संचारमाध्यममार्फत प्रकट गरेको उत्साह र स्नेहका अविष्मरणीय क्षणले म अहिले पनि अभिभुत भएको छु । युवा साथीहरूको साथ, अग्रजको हौसला र स्नेह मेरा निम्ति सधै प्रेरणा र उर्जाको रुपमा रहनेछन । मेरो सवैभन्दा ठुलो राजनीतिक सम्पत्ति पनि त्यहि हो । यो विश्वासलाई मैले समाज परिवर्तनका निम्ति आफूमाथिको चुनौंति र जिम्मेवारीकै रुपमा लिएको छु । यहि विश्वासको जगमा टेकेर महाधिवेशनमा पार्टी रुपान्तरण र मुलुकको समृद्धिका लागि मैले प्रस्तुत गरेका विषयहरूलाई अगाडि वढाउन आगामी दिनमा मेरो प्रयास थप उर्जाका साथ निरन्तर रहनेछ । हिजो जस्तै भोलिका दिनमा पनि म सदैव तपाईको साथमा रहनेछु । आगामी दिनमा पार्टीभित्र पार्टी सदस्य र प्रतिनिधिको मनमा लागेको कुरा निर्णयमा व्यक्त गर्नसक्ने अवस्थाको लोकतान्त्रिक पद्दति निर्माणका लागि पनि मेरो प्रयास रहनेछ ।
नेपाली काँग्रेस पार्टीलाई २००७ सालको जस्तो क्रान्तिकारी र २०१५ सालको जस्तो प्रगतिशील बनाउँदै परिवर्तित युगको हाँकलाई स्वीकारेर नेपाललाई सम्मानित र समुन्नत नेपाली बस्न सक्ने विलक्षण विविधताले युक्त समुन्नत घर वनाउने आधारशीला खडा गर्न र नेपाली काँग्रेसलाई समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेर मूलुकलाई समुन्नतिमा लैजाने अभियानको नेतृत्व गर्ने पार्टी बनाउन पार्टी पुनर्निर्माणको मेरो अभियान जारी रहनेछ । यस अभियानमा निरन्तर साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।
महाधिवेशमा महामन्त्रीको मेरो उम्मेदवारीलाई आफ्नै जस्तो गरि अहोरात्र खट्नुहुने आदरणीय अग्रज तथा साथीहरू र सुभेच्छा प्रकट गर्ने सवैप्रति पुनः हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।
- गगन थापा
Labels: MAIN, NEPAL, NEWS, POLITICS, PR/NOTICE
कृपया, सामाजिक सञ्जालमा हामीसँग जोडिनुहोस्
७ नं. प्रदेशमा अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुको अवस्था कस्तो छ त ? : साझा सवाल
किन ज्यानै जोखिममा राखेर उद्धारमा खटीरहेका छन् धुर्मुस ?
सेना पुलिसविरुद्ध धावा बोल्ने मान्छे अहिले गृहमन्त्री
हैटको बुढीको नायक राजेश हमालसँग लभ परेको खुलाशा
अचम्मैको झाँक्री ! बिरामीको बारबथान गर्न नि कत्ति जानेका ?
किन ४३ वर्षको उमेरमा ९ कक्षामा पढ्छिन् नायिका करिश्मा मानन्धरले ?
कमेन्ट गर्नेलाई फेसबुकमै डाँको छोडेर रुँदै गाली गरिन् सुनिताले, किन ?
'मलाई बियर चियर्स गर्ने श्रीमान चाहिएको छ' मोडल रश्मी तामाङ
बाप्परे, यत्ति खतरा नाच्ने युवती देख्नु भएको छ तपाईंले ?
फेसबुक साथीसँग शारीरिक सम्पर्क राख्दा आत्महत्या
संसारलाई चकित पार्ने अङ्ग भएका अचम्मलाग्दा महिलाहरु
मोटो भएर टेन्शन छ ? हप्तामा ४ के.जी. तौल घटाउनुहोस्
हाइवेमा खुलेआम यौनधन्दा, ड्राइभरलाई फ्री अरुलाई रु १००
नशामा मस्त युवतिले ख्यालठट्टा गर्दा ज्यान गयो
भाँडा माझेरै डाक्टर भएकी भावना तामाङको आँसु आउने जीवन भोगाइ
Copyright © 2013 www.NamasteNEPALI.com All rights reserved *** Designed by : Yogendra Milan Chhantyal